रातो टीका निधारमा.. [हेरौं, फेसबुकबाट कस-कसका तस्बिरहरु छापिए ?] « Sajhapath.com
रातो टीका निधारमा.. [हेरौं, फेसबुकबाट कस-कसका तस्बिरहरु छापिए ?]
काठमाडौं कात्तिक १० । दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज (सोमबार) मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउने क्रम देश विदेशमा चलिरहेको छ । यो वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विगत वर्षभन्दा कम चहलपहल देखिएको हो । राजधानी काठमाडौं, छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलाञ्‍चोक, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर लगायतमा प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि धेरैले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर घर घरमा टीका लगाउँदैछन् ।
घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट वैदिक विधिपूर्वक अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाइन्छ । आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप टीका, जमरा थापेर मनाइन्छ । आज नभ्याउनेले कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्न सक्नेछन् । हेर्नुहोस् फेसबुकबाट लिइएकोका मनपराइएका तस्बिरहरु ।